Ahoana no hikarakaranao indray rehefa tsy miraharaha zavatra hafa fotsiny ianao - An-Tsaina
Ka… tsy miraharaha intsony ianao, na iza na iza. Azo inoana fa vokatry ny fahaketrahana io.
Ny famoizam-po dia zavatra ratsy tarehy. Izy io dia mitelina ny fifalianao, manaisotra ny fahasambaranao, ary manaisotra anao tsy afaka mahatsapa ny fahatsapana feno ny fihetsem-ponao.
Ny famoizam-po dia mamono izay rehetra kasainy, na tsara na ratsy. Ny olona dia mifantoka amin'ny zavatra tsara satria mamirapiratra, mamirapiratra ary mahatsapa tsara. Fa na ny tsy fisian'ny fihetseham-po ratsy aza dia mety hahaverezana mangidy.
'Tokony hahatsapa ho malahelo aho, sosotra, tezitra, faly, manantena, feno fifaliana! Na inona na inona mihitsy! ”
Fa kosa, ny fahabangana sy ny tsy firaikana no hany azonao, lavaka tokony hisy ireo zavatra ireo.
Ary ny ratsy indrindra dia rehefa afaka kelikely, mitsahatra tsy miraharaha fotsiny ianao.
Mahatsapa fa toy izany ihany ny fiainana - sarotra, maharary, sarotra, feno fatiantoka ary korontana. Mahatsiravina ny olona. Tsy miraharaha ireo mpanao politika. Maty ny planeta.
Ny sefo any am-piasana dia maniry fampisehoana fotsiny ary ho anao mitsiky bebe kokoa satria manaparitaka ny rehetra ianao. “Avelao eo am-baravarana ny olanao!” hoy izy… Misaotra. Tongava amin'izany aho. Ihany, tsy miraharaha intsony aho.
Toy izany ihany ny fiainana. Sa tsy izany?
Ny fiainana dia mety ho sarotra, maharary ary sarotra be, nefa be dia be ny zavatra tokony hokarakaraina.
Niafina tamin'ny fanaintainana, zava-doza ary ny mahatsikaiky rehetra amin'ny fiainana dia zavatra mamirapiratra sy mamirapiratra tokony hotadiavina. Saingy mila mitandrina ianao mba hitady azy ireo. Tsy mitsambikina sy mikapoka ny tavanao fotsiny izy ireo.
Ahoana no ahafahanao mikarakara indray - momba zavatra, na inona na inona?
Mitadiava fanampiana matihanina - foana.
Ny fiatrehana ny famoizam-po sy ny tsy fananana fanantenana miaraka aminy dia mety tsy hitranga amin'ny famakiana lahatsoratra vitsivitsy amin'ny Internet.
Ny olana amin'ny famoizam-po sy ny ankamaroan'ny torohevitra ho hitanao manodidina azy amin'ny internet dia zavatra maro samihafa no mety hiteraka azy.
Mety ho voka-dratsin'ny fanafody na aretina ateraky ny toe-javatra tsy maharitra na maharitra eo amin'ny fiainanao, ny génétika, ny trauma, ny alahelo, na ny toe-javatra ankapobeny amin'ny fiainanao. Mety hoforonina ihany koa izy io ary hiharatsy kokoa amin'ny alàlan'ny alikaola sy alikaola.
Ny lakilen'ny famahana ity olana ity dia ny mamantatra hoe avy aiza io olana io amin'ny voalohany.
Azo inoana fa izany dia mitaky matihanina ara-pahasalamana voamarina afaka manampy anao handinika ny sainao, ny fiainanao ary ny tantaranao mba hahitanao ilay meloka.
Ny trauma tsy voavaha dia loharanon'ny famoizam-po sy fidorohana zava-mahadomelina ho an'ny olona. Ary io karazana asa ara-tsaina matotra io dia tsy zavatra azonao atao soa aman-tsara irery na amin'ny alàlan'ny fampahalalana hitanao amin'ny Internet.
Mila fanohanana matihanina ianao. Tsindrio eto raha hanomboka izany dingana izany.
Aza mampiasa ny herinao ara-pientanam-po amin'ny zava-mitranga ankehitriny.
Ny famindrampo sy ny fangorahana dia tena olana sedrain'ny olona maro. Ny olona iray dia tsy afaka miraharaha firy fotsiny alohan'ny hampandehanan'izy ireo foana ny tankin-tsolika anatiny.
Misy be dia be any izay tokony hiahiahy momba ny korontana amin'ny tsy fahamarinana ara-tsosialy, ny vaovaom-baovao mahatsiravina, ary ny tahotra, fatiantoka ary trauma izay mitranga manodidina.
Tsy afaka miraharaha ny zava-drehetra amin'ny fotoana rehetra fotsiny ianao ary manantena ny hanana toe-tsaina salama.
Tsy manampy ireo fikambanana vaovao. Asongadin'izy ireo betsaka amin'ny fanaovana tatitra mitongilana na mitanila izay mikendry ny hamorona fihetsem-po amin'ny mpijery azy ireo. Ary ireo mpitsikilo sy mpitsikera izay asongadin'izy ireo matetika dia matetika miasa amin'ny toe-panahin'izy ireo manokana. Sarotra ny mijanona ho fampahalalana nefa tsy mandany herin'ny fientanam-po be loatra amin'ny tenanao.
Ny vahaolana dia ny famerana ny fandraisanao zava-mitranga ankehitriny sy ny vaovao. Eny, mahazoa fampahalalana hatrany, fa ataovy amin'ny fomba voafetra avy amin'ny loharano tsy miandany ary tsy miangatra rehefa afaka ianao.
Miaina amin'ny vanim-potoana izay misy tsingerim-baovao 24/7 isika, saingy ny atidohantsika dia tsy natsangana hiatrehana ireo loza rehetra manerantany. Tsy nivoatra tamin'izany fomba izany fotsiny isika. [ Source ]
Aza misoratra anarana amin'ny vondrona media sosialy izay mitahiry fahatezerana, tsy firaharahiana ary vaovao ratsy.
Sakano na esory ireo olona miresaka tsy tapaka momba ny zava-mitranga ankehitriny amin'ny feed-nao.
Omeo fotoana ny sainao sy ny fanahinao hiala sasatra, na dia midika fialan-tsasatra amin'ny elektronika mandritra ny fotoana kelikely aza izany.
Mifantoha amin'ny fiahianao zavatra kely iray, ary avy eo atsangano izany.
Tsy ho mora ny mitsambikina avy hatrany amin'ny fikarakarana ireo zava-dehibe rehetra mitranga amin'ny fiainanao. Raha ny tena izy dia mety ho hitanao fa manahirana tanteraka izany ary tsy afaka atao.
Hevitra tsara kokoa ny manomboka amin'ny fiezahana hikarakara zavatra kely. Na mety efa manana zavatra kely amin'ny fiainanao izay tadiavinao ianao ary tsy niraharaha izany fotsiny.
Safidy lehibe hifantohana ny biby fiompy satria zavatra azonao karakaraina sy tiana tsy misy fepetra izy ireo. Tsy mila miahiahy momba ny biby fiompy manindrona ny lamosinao ianao na manao ireo zavatra manjavozavo izay ataon'ny olona indraindray.
Ny biby fiompy dia zavatra azonao omena ny fitiavanao, miahiahy momba anao ary miforitra rehefa mila fitiavana kely tsy misy fepetra ianao.
Fa hey, angamba ny biby fiompy tsy safidy mety amin'ny toe-javatra iainanao. Ny zavamaniry dia mety ho mpisolo toerana mety.
Makà tanimboly kely na mahaliana hikarakara anao. Amin'ny ankapobeny dia tsy mitaky fikarakarana be dia be izy ireo. Na izany aza, mbola afaka manampy anao hitadidy izy ireo ary hanatrika ny fikarakarana azy ireo, hahazoana antoka fa voakarakara tsara, notampohan-drano ary zezika.
Azonao atao ny mandinika zavamaniry voatabia misy vilany. Tsy sarotra karakaraina izy ireo, ary ho afaka amin'izany ny voatabia!
Na inona na inona zavatra kely hitanao fa mikarakara azy dia mifantoha mandritra ny fotoana fohy. Avy eo, rehefa mahatsapa fa vonona ianao, ampiasao ny fikarakarana tsapanao ho toy ny vato tohatra hitadiavana zavatra hafa hikarakara azy, ary avy eo hafa.
zava-dehibe ho fantatra momba ny fiainana
Mandehana miadana mba tsy handany fotoana be loatra amin'ny fivoaran'ny fihetseham-ponao. Raha, rehefa avy nanampy zavatra fahatelo na fahefatra hikarakarana anao, ohatra, dia manomboka mahita fa sarotra ianao na miditra ao anaty ny tsy firaikana, dia miverena miala amin'ny iray amin'ireo zavatra ireo.
Ataovy ireo zavatra izay nanome anao izany fotoana izany.
Makà taratasy sy penina ho anao. Manaova lisitr'ireo zavatra folo fanaonao taloha izay nanome anao antony manosika izay nokarohinao taloha.
Izy ireo dia mety ho avy amin'ny fiaraha-miasa sy mandany fotoana miaraka amin'ny namanao ka hatramin'ny fanaovana asa an-tsitrapo ho zavakanto manao fanatanjahan-tena na inona na inona.
Topazo maso ny lisitra ary diniho ny maha-azo ampiharina ny tsirairay amin'ireo zavatra ireo amin'ny fanatanterahana izao nomena ny zavatra tsapanao izao. Manomeza azy ireo hatramin'ny ankamaroany ka hatrany amin'ny fampiharana.
Manaraka, midina ny lisitra ary miezaha hanao ny sasany amin'ireo hetsika isan-karazany.
Ity fanazaran-tena ity dia mety ho ampy hanaitra ny faritra manentana ny atidohanao ary hanamora ny fikarakarana sasany. Mety ho sarotra ny manao azy, na tena tsy tianao ny manao zavatra.
Na izany aza, ireo fahatsapana ireo dia zavatra tsy maintsy atosikao fotsiny hanandrana hiteraka sasany amin'ireo tombontsoa azo avy amin'ny fanaovana ireo hetsika notanisainao.
Mametraha tanjona sasantsasany ary miezaha hanatratra izany.
'Tsy miraharaha intsony aho! Tsy miraharaha ny hamorona na hanatratra tanjona aho! '
Ary izany indrindra no antony tokony hamoronanao sy hanombohanao hiasa amin'ny sasany.
Ny antony manosika dia matetika tsy zavatra latsaka ao an-tsainao fotsiny. Indraindray tsy maintsy mamorona ny antony manosika anao manokana ianao amin'ny fametrahana tanjona sasantsasany hanenjika ary hanenjika azy ireo.
Ny hetsika fikatsahana tanjona dia mety ho ampy hamelomana sy hamoronana fiheverana kely, indrindra rehefa manana ny valin'ny ezaka ataonao ianao mba hankafizinao.
Ity koa dia ampahany lehibe amin'ny fifehezana. Indraindray sarotra ny mikatsaka tanjona kendrena satria mety hihena ny antony manosika rehefa reraka ilay asa na tsy mahita ny tanjona farany.
Ny fametrahana tanjona kely kokoa izay hitarika anao amin'ny tanjonao lehibe kokoa dia mety hanery anao hikarakara ireo dingana ireo, izay manivana any amin'ny faritra hafa amin'ny fiainanao.
Aza adino fotsiny fa tsy hahatratra ny tanjona rehetra apetrakao. Indraindray ianao dia tsy hahomby. Manao izany ny tsirairay.
Fa rehefa tsy mahomby ianao dia miezaha tsy hanipy ny tànanao amin'ny rivotra ary hiantsoantso hoe: 'Tsy miraharaha aho!' Satria, fantatrao hoe, raha tena tsy niraharaha ny tsy fahombiazana ianao dia tsy ho sosotra amin'izany.
Raha mahatsapa zavatra iray ianao rehefa tsy mahomby - na dia fihetseham-po ratsy aza - dia satria nikarakara ianao. Raiso izany fikarakarana izany dia jereo ny zavatra hafa azonao ampitana azy fa tsy. Mametraha tanjona vaovao, hafa, na manandrama fomba hafa amin'ny tanjonao voalohany.
Ny famakiana ity lahatsoratra ity aza dia mampiseho fa mikarakara ianao ampy te-hikarakara Bebe kokoa.
Izay no teboka fanombohana anao ankehitriny jereo izay hitarika ny dingana manaraka.
* Ny tsy firaikana dia zavatra mamono olona izay manaisotra antsika amin'ny fiainana. Raha sahirana ianao mahita ny antony manosika, mikarakara, na misy dikany, indrindra raha mieritreritra manimba tena amin'ny fomba rehetra ianao, dia hevitra tsara ny mitady fanampiana arak'asa amin'ny mpitsabo. Ny tsy fitandremana dia mety ho famantarana ny olana lehibe kokoa izay mila alamina alohan'ny hamerenanao ny fikarakaranao.
inona ny tanjona ao anaty fiarahana
25 Antony mahatonga anao tsy faly: zavatra mahatonga anao hahatsapa fahantrana
Antony 5 iainana raha toa ka tsy mahita mahita izao ianao izao
mandra-pahoviana no tokony hiandrasanao alohan'ny hampiarahana indray?
fiaraha-mientana mba hanao irery ao an-trano
tiako ny tovolahy inona no ataoko
valiny ho an'ny laza 2017
tiako be aho tiako rehefa mandratra ny fitiavana